Habar-Yoonis Raaca Ama Habaaska Raaca
Ceerigaabo, 3 Dec 2012 (Alldhooftinle.com)
Doorashooyinkii Somaliland ee Degmada Ceerigaabo oo Habar-Yoonis Ku badisay Iyo Gahayle (Majeerteen/Siwaaq-Roon) oo Calankii Hore Ee Somaliya Iyagoo Sita Ceerigaabo Ku Dhex Mudaharaaday.
Ismaaciil Xaaji Nuur (Habar-Yoonis)
Dir Iyo Daaroodow Jaalayaal, Habar-Yoonis Raaca Ama Habaaska Raaca
Waxaa dhowaan ka qabsoomay degmada Ceerigaabo ee Gobolka Sanaag doorashooyinkii dowladaha hoose iyadoo ay ku tartameeyn 6 Xisbi oo midkiiba uu soo sharaxay 21 xubnood oo uga mid noqon doona golaha deegaanka degmada.
Waxaa Gobolka Sanaag soo gaadhay 180 Sanduuq oo loo qaybiyey 5ta degmo oo Goblolku ka kooban yahay oo kala ah Ceerigaabo, Badhan, Dhahar, Ceelafweyn, Garadag. Mid walibana waxaa la dhigay tiro Sanaadiiq ah marka laga reebo Badhan iyo Dhahar oo iyaga Sanaadiiqdoodii la Cancell gareeyey xaga nabad gelyada darteed.
Magaalada Ceerigaabo oo la dhagay 147 Sanduuq ayaa magaalada dhexdeeda lagu reebay 24 sanduuq oo keliya halka 123 Sanduuqna loo saaray magaalada nawaaxigeeda iyadoo loo qaybiyey Aagag iyo Qabiil Qabiil.
Beesha Warsangeli iyo Ugaaslabe waxaa la siiyey 19 sanduuq.
Beesha Dhulbahante waxaa la siiyey 33 sanduuq.
Beesha Habar-Jeclo waxaa la siiyey 46 sanduuq.
Beesha Babar-Yoonis waxaa la siiyey 25 sanduuq.
Si kastaba ha loo kala badsadee hadana sida Sanaadiiqda loo kala qaatay codad looma kala helin iyadoo wax is weydaarsigu ku badnaa goobaha doorashadu ka dhacaysay, ayaa hadana Beelo gaar ahi si fiican ugu shubteen halka Beelaha kalane laga ilaalinaayey musuqmaasuq iyo is weydaarsi, halkan hoose ayaad ku arki doontaa inta qabiil walba ka helay Golaha Deegaanka Ceerigaabo iyo sida loogu shubtay.
Beesha Warsangeli iyo Ugaaslabe waxay heleen 1 cod
Beesha Dhulbahante waxay heshay 6 cod.
Beesha Habar-Jeclo waxay heshay 3 cod.
Beesha Habar-Yoonis Bari waxay heshay 11 cod.
Halkaas waxaad ka arkaysaa inay Beelaha Habaryoonis Bari iyo Dhulbahante ay si fiican ugu shubteen iyadoo Beelaha kalena la sheegay in codadkoodii ay is cuneen, rabshado iyo taayiro gubis ayaa ka dhacaayey tan iyo markii lagu dhawaaqay natiijada taas oo lagu diidan yahay sida codadka loo tiriyey.
Dhanka kale codadkii guud ahaan Gobolka Sanaag ayaa la sheegayaa inuu ku guulaystay:
Kaalinta koowaad Xisbiga Kulmiye (Habar-Jeclo).
Kaalinta labaadna Xisbiga Wadani (Habar-Yoonis).
Kaalinta saddexaadna Xisbiga Rays (Habar-Jeclo).
Kaalinta afraadna Xisbiga Umada (Habar-Yoonis), Kaalinta shanaadna Xisbiga Ucid (Ciidagale).